Soojiidashada Rayson Nonwoon dharka & alaab-qeybiyeyaasha
Rayson non non noven fabres dharka iyo alaab-qeybiye Shiinaha.
Pp Spunbond Dhar aan tolmo wanaagsan lahayn
Ss Non-xidhkii Fabric
Maqaarka Caafimaadka ee Aan Xidhnayn
Beeraha Beeraha Aan Ku Xidhnayn
Dhuxusha Ilaalinta Qabow
Maqaarka Xakamaynta Cawska Aan Xidhnayn
Dharka Miisaanka Aan Xidhnayn
Dharka Sms Non-xidhkii
Meltblown Dhar aan tolmo wanaagsan lahayn
Cirbadda Cirbadda ee Aan Xidhnayn
Maskaxda dharka aan tolmo wanaagsan lahayn
Rayson ayaa soo saaray PP Specunnbond Dharka aan la soo koobi karin, SS-yada dharka lagu dhejiyo, dharka aan caadiga ahayn, dharka aan la tolan ahayn, oo aan ahayn gogol aan la tolan oo aan lahayn oo dhar ah oo aan lahayn.
Rayson waxaa ka go'an inuu yahay mid aan cilmi baarista lahayn, horumarka iyo wax soo saarka. Alaabtooda ugu muhiimsan waa PP-ga dharka ee PP-ka ee dharka lagu dhejiyo, SS non ee dharka lagu dhejiyo, SMS aan lahayn dharka lagu dhejiyo, majaajillada aan la tolan ahayn, cirbad cirbad aan lahayn dharka iyo spunlace-ka aan lahayn.
Buluug ss-ka ah oo aan ahayn mid aan ahayn ballaadhan 25gr 175mm
Waxanbuluug ss-ka buluug ah oo aan ahayn waxaa loo isticmaalaa lakabka koowaad ee maaskaro. Caadi ahaan waa 25grar ballac ah 175mm. Dharka SS-ka ee aan la xidhin waa mid jilicsan, oo la neefsan karo oo biyo ah. Dharkan buluuga ah ee buluuga ah ee aan soo saarnaynin Rayson ayaa dammaanad ka qaaday tayada.
Soosaaraha xirfadleyda ah ee ka mid ah miiska aan loo dhejin karin (duub) ee Shiinaha
Maqaarka aan loo dhejin lahayn, oo sidoo kale loo yaqaan maro tnt miiska, waa dhar ka samaysan shey polypropylene ah. Faa'iidooyinka eco-saaxiibtinimo, si fudud loo isticmaali karo, iyo dib loo isticmaali karo, oo aan loo isticmaalin tobanka loo yaqaan 'polypropylens', iyo qaar ka mid ah dhacdooyinka gaarka ah sida xafladaha ugu muhiimsan, alaabooyinkayada ugu muhiimsan waa gogosha aan la tolaynin. Roll, TNT MENNERIN MENNER, MUQDISHO TODECLOTHOTHOTHOTHE iyo MACLUUMAAD MADAXWEYNE.
Dharka jilicsan / biyo-galka ah
SS-ka aan ahayn dharka aan la tolanneyn waxay ka samaysan tahay tikniyoolajiyadda nambarka nambarka ah. Miyaad Lin ka dhigtaa Qeexitaanka Dharka Hydrophilic? Qaar ka mid ah astaamaha salaan ee dharkan aan la tolay waa la neefsan karaa, jilicsan, biyo-ku-dhafan oo aan dhib lahayn. Noocyadan dharka ku dhaca biyaha yar waxaa loo isticmaalaa sida maaskaro gudaha ah ee maaskaro. Rayson waa mid xirfad-yaqaanno ah oo ku-taliyayaasha ah ee ku-soo-saareyaasha ah ee aan la qorin ee waraaqaha ah, oo sanado badan oo khibrad hodan hodan ah.
Ss xaashida sariirta ee isbitaalka ee aan la tuuri karin
SS-yada aan la-furin waa shey wanaagsan oo loogu talagalay go'yaasha sariirta sariirta sariirta ee lagu tuuro, loo isticmaalo isticmaalka sariiraha kalkaalinta, sariiraha cosbitaalka, iyo sariiraha fiilada. Xaashiyahaasi xaashidan ayaa la tuuraa, oo ay soo saaraan go'yaal sariirta sariirta oo la tuuro, taasoo la micno ah inay siiso xalka nadaafadda ee joogtada ah ee xarun kasta.
Raysson nonn oo ah shirkadda 'loven' waa hogaamiyaha soo-saare soosaara oo aan ahayn dharka iyo alaab-qeybiye Shiinaha oo leh 15 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan waxsoosaarka aan la soo koobi karin iyo r&D. Nidaamka maaraynta tayada ee kaamilka ah iyo khibradda wax-soosaarka hodanka ah waxay xaqiijin kartaa tayo xasilloon oo wax soo saar leh
Kooxda iibka ee leh 15 sano oo waayo-aragnimo ganacsi oo caalami ah ayaa ku siin kara adeegyo xirfadeed Ingiriis, Isbaanish, Talyaani, iyo Carabi. Alaabadayada waxaa loo iibiyaa in kabadan 40 wadan oo adduunka ah.
Rayson wuxuu leeyahay 10 khad oo wax soo saarka ah oo aan xamuul lahayn oo aan la soo saarin, oo soo saari kara 3,000 tan oo dhar ah oo aan lahayn oo midabbo kala duwan ah bil kasta, oo leh ballaca ugu badnaan ee 4.2m. Noocyada wax soo saarka ee PP-ka waa PP-ga oo aan la tolay, SMS, dharka dhalaalaysa, iyo irbad dharka lagu garaacay ee dharka lagu garaacay, iyo spun jilicsan dharka aan la xidhin.
Muddo-dheer ee alaabada cayriin ee muddada-dheer ee bakhaarka ayaa hubiya xasilloonida qiimaha badeecada.
Ku saabsan Rayson
Foshan Rayson oo aan ahayn Woven Co., Ltd. Waa shirkad si aan caadi ahayn, oo laga aasaasay 2007, oo ku taal magaalada Foshan Shiicada ee Foshan Shishan, garoonka diyaaradaha ee Guanzhou Baiyun, oo ku xigta Volkswagen, Honda, CMO iyo shirkado kale, oo leh daboolyo kale. Meel qiyaastii ah 80,000 mitir oo laba jibaaran oo shaqeeya in ka badan 400 oo qof. Shirkadda ayaa ku takhasustay soo saarista dharka lagu dhejiyo ee spunbond-ka ee loo yaqaan 'Specunbond' iyo waxyaabaha aan la tolay oo aan laheyn, oo in kabadan 90 boqolkiiba alaabada la iibiyay in ka badan 30 waddan.
Foshan Rayson oo aan ahayn Woven Co., Ltd. Waa soo-saareyaal xilliyeed oo ku yaal warshadaha warshadaha dharka ee aan la qorin ee sannadaha khibrad leh. Waxaa ka go'an in baaritaan aan la-fulini ahayn, horumarka, iyo wax soo saarka, oo ay leedahay toban sadarka wax soo saarka ee dharka lagu dhejiyo, SS-ka aan la soo saarin, SS-yada, irbad-saarka, irbad aan lagu dhejin lahayn. Soosaarida Miisaanku wuxuu ka kooban yahay 10GSM illaa 150GSM gudahooda 4.2m ballac ahaan, oo leh tiro wax soo saar sanadle ah oo miisaankeedu ka badan yahay 36,000 tan. Shirkaddu waxay awood u leedahay soo saarista dhar aan la soo koobi karin oo midabyo badan leh iyo cabirro badan, oo ku habboon adeegsiyo badan oo kala duwan.
Na soo xiriir
Kaliya ka tag e-maylkaaga ama nambarkaaga taleefanka foomka xiriirka si aan kuugu soo dirno xigasho bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeena ballaaran ee aan kala go 'lahayn!
Rayson non woven fabric